Filtrer les éléments par date : lundi, 11 février 2019
lundi, 11 février 2019 22:25
Andilana Nord-Amparafaravola: Roa lahy maty tototry ny tany
Namoizana ain'olona ny fitrandrahana eladrano tao amin'ny Kaominina Andilana Nord, Distrika Amparafaravola.
Androany tamin'ny roa ora tolakandro no niseho ny loza. Mpitrandraka efa-dahy no tototry ny tany, ka roa tamin'ireo namoy ny ainy.
Mpiavy avy any amin'ny Kaomina Morarano Chrome, Distrika Andilamena ireto tra-doza ireto.
Efa ho roa taona teo izay ity toeram-pitrandrahana ity. Sambany io loza io
Mbola tavela any anaty lavaka manana halalina 5m any ny razana hatramin'ny hariva teo.
lundi, 11 février 2019 21:15
Kidnapping: Manao fanamby ny mpitandro filaminana
Nilaza ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimaria, ny Jeneraly Ravalomanana Richard, fa fanambin'izy ireo ny hampihena, eny ny tsy hisian'ny fakana an-keriny an-tanandehibe ato anatin'ny telo volana.
Hisy ny andrana ho fifehezana izany ato ho ato, araka ny fanazavany hatrany.
lundi, 11 février 2019 21:03
Tehina fotsy - Olona manana kilema: Ampio izy ireny, azo omena asa ireo olona manana kilema
Olona jamba no mitondra ireny tehina fotsy ireny. Efa ianarany ny lalana falehany, ka misy repère izy, amin'izay lalana alehany izay. Rehefa maro anefa ny olona, ary indraindray dia miala ilay repère ahitany ilay lalany, dia sahirana izy.
Ny mampalahelo dia vitsy isika no manampy azy ireny, misy aza ny fiara, na mba hijanona andefa azy hiampita aza dia tsy atao.
Ny taxibe moa dia efa tsy resahina, raha esorinao an-tenan-dalana izy, dia very repère izy, tsy fantany ilay toerana analanao azy. Mbola tsy tafiditra izy dia efa ny andao ihany no mahamaika ny resevera.
Rehefa raikitra moa ny mêlée hiditra taxi-be, dia tsy misy te halala izay olona manana kilema izany intsony, dia tratra hariva lava eo izy.
Tokony iantohan'ny fanjakana tanteraka ny fitaovana ampiasain'izy ireny, ny fitsaboana azy, ny fiofanana.
lundi, 11 février 2019 16:23
Ankilizato-Mahabo: Nanatitra fanafody kitrotro ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka Pr Juliot Rakotonirina
Kaominina isany lasibatry ny valanaretina kitrotro i Ankilizato, Distrika Mahabo, Faritra Menabe. Tonga teto an-toerana nanolotra fanafody hitsaboana maimaimpoana ny mponina ny minisitry ny fahasalamam-bahoaka Pr Juliot Rakotonirina omaly alahady 10 febroary, ary nijery marary tao amin'ny hopitaly.
lundi, 11 février 2019 16:08
Toamasina: Ravan’ny polisy ny tambazotra iray mpanao fanafihana mitam-piadiana
Ny atoandron’ny zoma 8 febroary teo no saron’ny Polisy ny Boriborintany I ao Tanambao I ity tambazotra ity, miaraka amin’ireo fitaovam-piadiana fampiasan’izy ireo, niampy ody gasy ho fiarovan-tenan’ireto andian-jiolahy ireto.
Efatra no tratra ka vehivavy ny telo, izay vao tera-bao iray volana ny iray. Karohina fatratra ny naman’izy ireo ary efa nisy ny fanapariahana ny sarin’izy ireo.
Hatolotra ny Fampanoavana ny alatsinainy 11 febroary izy efatra mianadahy tratra ireto.
lundi, 11 février 2019 13:54
Faire travailler les Malagasy
Dans sa politique générale de l’Etat (PGE) à la rubrique « paix et sécurité » considérée comme une priorité absolue, l’administration Rajoelina et Ntsay affirment des intentions qui ont toujours été dites par les gouvernements précédents : « garantir une paix durable dans le pays » et depuis deux décennies « l’effectivité de l’Etat de droit ».
Comme d’habitude on a énoncé les différents moyens à mettre en œuvre :
- Dotation en matériels adéquats des forces de sécurité urbaine comme rurale, avec la mise en place des centres de formation adéquats pour former nos forces d’intervention spéciale (FIS) dans les zones rurales, comme dans les zones urbaines, avec un redéploiement des militaires dans les zones rouges;
lundi, 11 février 2019 13:48
Fiaraha-miasa: Naneho ny fahavononany hiara-hiasa hatrany amin’i Madagasikara ny filohan’ny BAD, Akinwu Adesina
Nisy ny fihaonana teo amin’ny filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara Andry Rajoelina sy ny Filohan'ny Banky Afrikana momba ny Fampandrosoana (BAD), Akinwu Adesina, omaly, nandritra ny fihaonana an-tampony faha-32 ny Vondrona Afrikanina tanterahina ao Addis-Abeba renivohitr’i Etiopia.
Nangataka ny hamoahana haingana ny fanampiana ara-bola hanamafisana ny fampiharana ny tetik'asa sy vina fampandrosoana izay tafiditra ao anatin'ny politika vaovao ny Fanjakana ny filoha malagasy. Sehatra laharam-pahamehana amin’izany ny fanjariana ara-tsakafo, sy ny fampiasana ny angovo azo havaozina.
lundi, 11 février 2019 13:12
Fanotofana tany tsy ara-dalàna: Fiara vaventy telo tra-tehaka nitaona tany, ary nogiazana
Tra-tehaky ny avy teo amin'ny Ministeran'ny Fanajariana ny Tany, ny Toeram-ponenana sy ny Asa Vaventy (MAHTP) nanao fanotofana tany tsy nahazoana taratasy fahazahoan-dalana tetsy amin’ny sampanana Tsarasaotra-Antananarivo faha-5 ny marainan'ny sabotsy 09 febroary teo ireo fiara ireo. Nogiazana avy hatrany ireo fiara telo ireo, nisy iray fahaefatra afaka nitsoaka.
Nokasaina hanorenana fotodrafitr’asa ity tany nototofana ity izao tratran’ny teo anivon’ny MAHTP izao.
Anio alatsinainy no havoaka ny sazy mikasika ity raharaha ity. Nandefasana “interdiction de remblais” na tsy fahafahana manototra tany avy hatrany kosa ny teny an-toerana.